बझाङको साईपाल गाउँपालिकामा हेलिकप्टरमार्फत झोलुङ्गे पुलको सामान ढुवानी गरिएको छ । जिल्लाको दुर्गम साइपाल गाउ“पालिकाको वडा नं ४ मा इङलद्वार पुल ठेक्का सम्झौता भएको पा“च वर्षपछि सुरु हुन लागेको हो । समयमै पुल निर्माण हुन नसक्दा खोला तर्ने क्रममा पछिल्लो पा“च वर्षको समयमा ७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन । पुल नबन्दा गत वर्ष सा“घुबाट नदी तर्ने क्रममा सा“घु भाँचिएर २ जना यार्सा संकलकको ज्यान गएको थियो भने २०७५ सालमा एकै घरका तीन जना किशोरको ज्यान गएको थियो ।
प्रदेश सरकारले बजेट खर्च तथा योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी नचाहिने व्यवस्था गरेपछि समयमै सुदूरपश्चिममा योजना कार्यान्वयन हुन थालेका छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का योजना कार्यान्वयन गर्न थालेका हुन् । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले प्रदेश सभाबाट पास भएका योजनाहरु कार्यालयमा साउन पहिलो साता नै आएको र हाल त्यसको कार्यान्वयन गर्न थालेको जनाएका छन् ।
पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा विगत चार दिनदेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा अन्धकारमय बनेको छ । १४.८ मेगावाट क्षमताको मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्रमा जडित स्थानीय स्तरमा वितरण गर्ने ट्रान्सफर्ममा खराबी आएपछि विद्युत् सेवा अवरुद्ध बनेको हो ।
लमजुङसहित तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङबाट गत आर्थिक वर्षमा ९१ करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ । संघ र प्रदेशबाट विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटमध्ये आव ०७६÷७७ मा काम हुन नसकी ९१ करोड २४ लाख, चार हजार आठ सय ७० रुपैयाँ फिर्ता भएको हो ।
भेरी बबई बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनामा जस्तै टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मार्फत सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउनका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले नम्र्स बनाएर मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा टीबीएमबाट सुरुङ निर्माण कार्यको नम्र्स स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको त्रासका बीच पनि यहाँको हिमा गाउँपालिकाले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा विषयगत कार्यालयका कार्यक्रम बाहेक हिमा गाउँपालिकाले १० करोडको लागतमा ८४ वटा योजना निर्माण गरी सम्पन्न गरेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पशु लगायतका विषयगत कार्यालयको बाहेक पालिकाभरीनै करिब १० करोड लागतका ८४ वटा साना ठुला योजना सम्पन्न भएका हुन् ।
बैतेश्वर गाउँपालिका–८ क्षत्रपाको वडा कार्यालय केही दिनअघि उद्घाटन भएको थियो । बागमती प्रदेश सभाका सांसदहरू पशुपति चौलागाई र विशाल खड्काले कार्यालयको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । बैतेश्वर गाउँपालिकाले वडा कार्यालय निर्माण गर्नु पनि मुख्य उपलब्धिको रुपमा लिएको छ । बैतेश्वर गाउँपालकाको ८ नं. वडा कार्यालय मात्र होइन ८ वडा वडा कार्यालयमध्ये ६ वटा पूरा गरिसकेको छ भने २ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखा प्रमुख इन्जिनियर युधिष्ठिर केसीले वडा नं. ६ र ७ का वडा कार्यालय बाहेक सबै वडा कार्यालय पूरा भएको जानकारी दिए ।
संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन इसुवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनीले स्थानीयलाई ९ करोड थप रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । केभीएनआर विराटनगर र बिगवल्र्ड हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको आयोजना सञ्चालनका लागि २०७५ फागुन १ मा कम्पनीको नाममा खरिद गर्दा स्थानीयलाई बारीको प्रतिरोपनी २ लाख र पाखोबारीको प्रतिरोपनी १ लाख ५० हजारका दरले मुआब्जा उपलब्ध गराएको थियो । जग्गा बिक्री गरेको करिब १ वर्षपछि आयोजनाले स्थानीयलाई सस्तो मूल्यमा जग्गा खरिद गरी मार पारेको भन्दै स्थानीयले आयोजना सञ्चालनमा अवरोध गर्दै विरोध जनाएका थिए ।
आगामी पाँच वर्षभित्र देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि रसायनशास्त्री वैज्ञानिक मोहनसिंह प्रधानले नयाँ सूत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैज्ञानिक प्रधानले अल्वर्ट आइन्स्टाइनको सापेक्षताको सिद्धान्तलाई परिस्कृत र व्याख्या गरेर आफूले नयाँ सूत्र बनाएको स्पष्ट पारेका छन् ।
भारतको ऊर्जा प्रणालीको सन्तुलन मिलाउन नेपालको बिजुली निर्विकल्पजस्तै देखिएको छ । तीन लाख ६० हजार ४ सय ६८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन रहेको र र वातावरणमैत्री नमानिने कालो ऊर्जाको रुपमा लिइएको कोलबाट उत्पादित ऊर्जाको बर्चस्व रहेको भारतका लागि नेपालको बिजुली निर्विकल्प देखिएको हो । हाल ऊर्जा प्रणालीमा कोलको योगदान मात्र ५५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ९८ हजार मेगावाट छ भने हिस्सालाई पाँच वर्षभित्र ३० प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेको छ ।
बन्दाबन्दीको समयमा पनि सुनकोसी गाउँपालिका–६ अमारेमा तुरतुरे खानेपानी आयोजना तथा न्यौपानेटारमा निगौली ओडारे खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् । ती खानेपानी आयोजनामार्फत अमारे र न्यौपानेटारका घरहरूमा ५९ धारा निर्माण भई ४ सय २३ जना लाभान्वित भएका छन् । अमारेका ३९ घरमा धारा निर्माण भई १ सय ४५ पुरुष १ सय ३६ महिला गरी जम्मा २ सय ८१ जना र न्यौपाने टारका २० घरमा धारा निर्माण पश्चात ७२ पुरुष र ७० महिला गरी जम्मा १ सय ४२ जना प्रत्यक्षरुपमा सुरक्षित खानेपानीबाट लाभान्वित भएका हुन् ।
जनताको अपेक्षाअनुसारको विकास गर्नुपर्ने त छँदैछ, नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्य भन्छन्, “कर्मचारीलाई सहज रूपमा काम गर्न खुल्ला कार्यकक्ष आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि प्रशासनिक भवन निर्मार्णाधीन छ ।” पृथ्वी राजमार्गबाट ५०० मिटरभित्र रहेको जुगेडीमा साढे चार तले भवन ४० हजार एक सय ३० स्क्वायर फिट क्षेत्रफल तथा ३९ वटा कोठाको निर्माण हुन लागेको इन्जिनियर नवराज श्रेष्ठले बताए ।